Badbaadada Waayeelka / Minnesota.gov
Kala hadal waalidiintaada dhaqaalahooda
Fayo qabka dhaqaale iyo baahiyaha daryeelka xiliga dheer waxay noqon karaan dhexda kuwa ugu xasaasidan, arrimaha adag ee qoysasku kahadlaan.
Marka ay tahay mowduuc aan raaxo lahayn, waa muhiim in carruurta waa wayni ay falan qaynta la yeeshaan waalidkooda gaboobay wakhtiga horaantii si ay uga hortagaan dhibaatooyinka iyo is faham la’aanta jidka haysa. Waxanu dhiirigelinaynaa dadka reer Minnesota inay qaataan wakhtiga ay kula hadlaan kuwooda ay jecelyihiin waxa ku saabsan ballamaha dhaqaale iyo rabitaanka daryeelka xiliga dheer.
Ku bilow wada sheekaysiga afartan su’aalood:
Miyaa adiga iyo waalidkaaga ogtihiin calamada cas ee khiyaamada?
Sida waafaqsan Wakaalada Dhowrista Maalgeliyaha, mid ka baxsan shantii qofba oo ka wayn 65 ayaa ku dhacay khiyaamada maaliyada. Daraasadii u dambaysa waxay ku qiyaastay in dadka Maraykanka gaboobay laga khiyameeyay saddex bilyan ood oolar sanad kasta.
Hubso in waalidkaagu ogyihiin sida ay uga ilaalin karaan lafahooda khiyadam. Tusaale ahaan, waa inay iska ilaaliyaan siinta macluumaadka gaarka ah dadka aanay aqoon iyagoo ka jawaabaya fariimo moobil, iimaylo ama wicitaano, iyagoon eegin cida ay sheeganayaan inay yihiin ama halka ay sheegayaan inay ka soo wacayaa. Ka digtoonoow dhaqanada muujin kara waalidkaagu inuu yahay dhibanaha ka faa’iidaysiga dhaqaalah, sida biilasha aan la bixin, lacag la’aanta aan la sharaxin ama soo baxa muuqaalka kediska ah ee “saaxiib” cusub”
Wa maxay qorshaha xaalada ay dhacdo arrimo garaadka ama dhibaatooyin kale oo caafimaad j=halka waalidkaagu aanu awood u yeelan inay daryeelaan dhaqaalahooda?
Dhiirigeli waalidkaaga inay si rasmi ah u waydiiyaan qof ugu adeega sidii wakiilkooda caafimadka iyo dhaqaalaha ama awooda qareenka. Way wanaagsan tahay haddii waalidkaagu doorto qof ay aaminsanyihiin si ay u sameeyaan go’aanadooda dhaqaalaha. Haddii ay suuraga tahay, waa inuu ka jiraa heshiis gudaha qoyska oo ku saabsan cida lagu aaminayo masuuliyadahan. Qofku sidoo kale waa inuu lajoogteeyaa wada xidhiidhka cad ee dhammaan xubnaha qoyska.
Halka ay waalidkaagu ku ilaashadaan kootooyinkoodu, xeerarka caymiska, iyo warqadda caddaymaha kale ee muhiimka ah haddii loo baahdo?
Haddii caafimaadka qof waalid duq ah uu si kedis ah uga sii daro; kharashka ka baxsan jeebka ayaa ugu darsami kara si degdeg ah. Ka hadal dhammaan ilaha dakhliga iyo daboolida caymiska si go’aan looga gaadho haddii waalidkaagu uu dabooli karo daawaynta caafimaad ee aan la filayn. Haddii waalidkaagu aqbalaan, aqoon u yeelo laftaadu daboolidooda caymiska iyo hantida maaliyada sida lacagta la kaydsado, qorshayaasha hawl gabka, saamiyada, IRAs iyo qorshayaasha 401K. Dakhliga, hantida iyo caymiska waxay sameeyaan u qalmida Medicaid iyo doorashooyinka Medicare
Waa maxay rabitaanka waalidkaaga ee hantidooda, guryaha, iyo tayada mustaqblaka ee nolosha?
Waydii waalidkaaga haddii ay sameeyeen dardaaran iyo halka ay taalo. Garo aragtiyaha waalidkaaga daryeelka dhamaadka nolosha siiba, oo husbo dookhyadooda warqadda rasmiga ah sida dardaaranka qofka nool qoro ama dardaaranka horumarsan ee daryeelka caafimaadka ka hor inta aanay in dheeraad ah awoodin caddaynta oggolaanshaha laga warqabo.
Haddii walidkaagu uu ku raaxaysanayo rajada ku noolaanshaha guriga kalkaaliska, ama isaga ama iyaddu uu leeyahay qorshayaal uu la soo guuro xubin qoyska ah ama saaxiib miyaa daryeel gaar ah loo baahan doonaa? Ahow mid furan toos ah waxa ku saabsan kartidada aad ku sharafto rabitaanadan. Haddii waalidkaagu ubaahanyahay guriga daryeelka kalkaaliska, waa muhiim in la ogaado haddii dakhligooda bilaha ah uu buuxiyo shuruudaha u qalmida gobolka ee Medicaid;
Wixii ilaha badan ah, reer Minnesota waxay la xidhiidhi karaan Laynka Senior LinkAge , adeega bilaashaka ah ee ay bixiso gobolku oo ku haga duqayda iyo qoysaskooda ilaha bulshadda. Ururka Maamulayaasha Amniga waqooyiga Maraykanka (The North American Securities Administrators Association’s ) bogga internanta ee Serve Our Seniors waxa nuu sidoo kale siiyaa macluumaad daryeelayaasha.
Khiyaamada telefoonka waxay si soo kordhaysa u tahay qaab khiyaamo oo baahsan. Telefoonka caadiga ah waa hubka maanta ay doorteen dembiilayaashu. Mid ka mid ah cabashooyinka ugu badan ee ay ka warbixiyeen duqayda iyo kuwooda ay jecelyihiin waa inta jeer ee ay la kulmaan khiyaamooyin iyo mashaariicda khiyaamada ah ee telefoonka. Tusaalooyinka guud ee khiyaamada
Waxaan kaa soo wacayaa Microsoft oo waxay u muuqataa inaad leedahay fayras…”
“ Waxaad ku guulaysatay bakhtiyaanasiib ajnabi ah oo waxaad u baahanytahay inaad lacag soo dirto si aad u sheegato guushaada…”
“Maalgelintu khatar hoose iyo soo celin sare ayay ku jirtaa.”
“Soo jeedintu waxay ku wanaagsan tahay maanta oo keliya.”
“Kani waa wiilka aad awowga u ahayd oo waxaan ku jiraa jeelka oo waxaan u baahanahay lacagta damaanada.”
“Waxaad ku qaamaysantahay lacag oo waxaad la kulmaysaa cawaaqib khatar ah.”
Khiyaamoolayaashu waxay isticmaalaan macluumaadka dad waynaha si ay u helaan magaca iyo lambarka telefoonka. Inta badan waxay isticmaalaan farsamooyinka baqdin gelinta si aad lacag u soo dirto, u bixiso macluumaadka gaarka ah, ama ay u soo geli karaan kombuyuutarkaaga. Haddii qof ku soo waco oo uu doonayo inaad lacag dhiibto, aad uga shaki. Xusuuso, waxay u eegtahay inay aad u wanaagsan tahay inay run ahaato, maangal ahaan way tahay.
Dhammee wicitaanka: Ha noqonin “dhibanaha anshax wanaaga.” Markay timaado ilaalinta naftaada, ma jirto shay sidan ah sida noqoshada axmaq. Dhammee wada sheekaysiga oo dhig telefoonka.
Saaxiib la hadal: Haddii aad ku wareersantahay ama aad ka walaacsantahay wicitaanka telefoonka, la xidhiidh saaxiib la aaminsanyahay ama xubin qoyska ah wixii talo ah. Ha u oggolaan qofka ku soo wacaya inuu ku ordo gaadhida go’aanka
Ka warbixi khiyaamada: Ma joojin karto khiyaamada aynaan wax ka ogayn. Na soo wac oo nooga warbixi khiyaamada markaas kale ma noqdo dhibane. Waxaad la soo xidhiidhi kartaa Xarunta Adeega Macmiilka (Consumer Services Center) lambarkan 651-539-1600 or 1-800-657-3602 (Greater Minnesota keliya) ama iimayl ahaan consumer.protection.@state.mn.us.